Kedu ka m ga - esi kwụsị nwa m?
Ihe mkpịsị aka aka
Njikwa na-eme ka ọ dị nwayọọ nwayọọ
Akwụkwọ dịka ngwá ọrụ
Ista bunny, Santa Claus ma na-eme ka ozi ọma mechie
Enweghị ike ịchọta ụmụ ọhụrụ na ndị na-eto eto n'enweghị ihe na-eme ka ha nwee ike ịba uru, n'ihi na ha bụ ihe enyemaka ha kacha amasị ma ndị nne na nna na-enwe obi ụtọ mgbe a na-eme ka ụmụ ahụ zuru ike n'oge ụfọdụ. Otú ọ dị, ọtụtụ ndị nne na nna nwere obi iru ala mgbe ha chere oge kachasị mma iji kpochapụ ha.
Atụmatụ iji mee ka ọ gbanyụọ
Ụfọdụ ndị ọkachamara na-ekwu na a ga-ewepụ nwa ọhụrụ site na pacifier tupu afọ nke abụọ nke ndụ.
Ihe kpatara nke a bụ na iji aka na-eme ihe mgbe nile bụ ihe ize ndụ nke na ekwenye ezé ma ọ bụ agba na-apụta n'ime nwatakịrị ahụ.
Otú ọ dị, nkwupụta a n'ozuzu agaghị emetụta ụmụaka ọ bụla, dị ka mmepe nwatakịrị na-enwe ọganihu n'ọtụtụ dị iche iche.
Maka ihe ka ọtụtụ ụmụaka, a na-ejikarị ihe na-emepụta ihe iji mee ka obi sie gị ike. Karịsịa n'abalị ọ bụ ya mere ọ dị mkpa ka ọ dịkwuo mkpa. Ihe kpatara ihe eji eme ihe na-eme ka nwa ahụ dị. Ihe na-eme ka ịṅụ aṅụ na-echetara ịṅụ ara na ara nne, nke dị mkpa maka ịzụ nwa ahụ. Ịnya ara na mgbakwunye na ihe oriri na-eme ka ọrụ dị jụụ.
Ọtụtụ ndị nne na-azụ nwa ga-ekwenye na nwatakiri ahụ na-ejidekarị obi n'abalị naanị onyinye nke ara. Onye ngwugwu nwere ike ime ụdị ọrụ ahụ.
Ọ bụrụ na inyeghi nwa ahụ ka ọ bụrụ ihe na-eme ka ọ dị mma, ọ nwere ike ime na nwa ahụ na-ahọrọ isi aka kama ịmepụta ya.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na mmadụ ekwere na ndị ọkachamara, otú ahụ ka mkpịsị aka na-aṅụ ma mgbe ahụ ọ ga-aka mma, Ihe kpatara ya bụ na ịṅụ aṅụ na-egosi na a ga-agbahapụ ya n'oge na-adịghị anya karịa aṅụ na mkpịsị aka.
Ihe ngosiputa nke ezé, nke enwere ike ime ka oge na-egbu oge karịa, site na mkpịsị aka karịa site na pacifier.
Tụkwasị na nke a, ị nwere ike iji onyinye dị mma karịa mkpịsị aka nke nwatakịrị ahụ nwere. Ka o sina dị, maka ọtụtụ ndị nne na nna ọhụrụ, ajụjụ ahụ ka dị, olee otú nwa gị ga - esi gbanyụọ ihe na - eme ka ọ dịkwuo mma?
Tupu ịkwa akwa bụ nke mbụ niile. Ya mere, ekwela ka ọ bụrụ ihe na-adịgide adịgide site na mmalite, n'ihi na nke a ga-eme ka nhicha dị arọ karịa. Site na mbido, ị ga-aga na-emegharị oge n'oge ụfọdụ dị ka mgbe ị na-ehi ụra ma ọ bụ iji nye mmesi obi ike.
Tụkwasị na nke a, ị gaghị enye nwa ahụ nsogbu site na otu ụbọchị gaa na nke ọzọ n'enweghị nsogbu ọ bụla. Otú ọ dị, ọ na-atụ aro iji nwayọọ nwayọọ hapụ ogbugba ahụ, n'ihi na nsị zuru ezu dị mfe karị. Ndị nne na nna kwesịrị ịgwa nwatakịrị ahụ ma kwado na ọ nwere ike ịbụ nnukwu nwa agbọghọ ma ọ bụ nnukwu nwa ugbu a nakwa na ị dịghị mkpa ka ị nwee ike ịkụzi ihe ọzọ.
Iji mee ka ọ dịkwuo mfe ka ụmụaka nọrọ jụụ, ịnwere ike iji enyemaka dị iche iche. Dị ka ihe atụ, o nwere ike ịbụ na ị ga-enwe akwụkwọ ụmụaka na isiokwu a. Enwere nhọrọ dị ukwuu nke akwụkwọ ọgụgụ ndị dị otú ahụ na-ekwu, dịka ọmụmaatụ, isiokwu nke ụlọ akwụkwọ ọta akara, nwanne maọbụ ọkpụkpụ.
Otutu umuaka ndi mmadu na akuko ndia ma choro igbanwe ha otutu oge. Conny adịghị mkpa ka ọ bụrụ onye na-emegharị ihe ọzọ, n'ihi ya, ị na-azụkarị mkpa ọ dị ịkwụsị ịchọrọ ihe na-eme ka ọ dị mfe.
Nwatakịrị ahụ nwere ike ịghọta na ọ nwere ike ịbụ ihe ezi uche dị na iji ihe na-emepụta ihe mgbe ụfọdụ.
Ụzọ ọzọ dị mma iji mee ka ọ dịkwuo mfe maka nwatakịrị ahụ ka ọ na-ekwu okwu ọma maka ihe na-eme ka ọ dị mma bụ ime ememe nke ọma ka o wee doo nwa ahụ anya na ngalaba na-abịa na njedebe.
Dị ka ọnwụ nke ezé, ịnwere ike iji akara egwu ahụ dịka ihe nkwado na usoro dị nfe maka ịnyefe nke pacifier.
Ogbako ahụ na-emegharị ihe na-eme ka ọ dịkwuo, nke a na-etinye n'okpuru ohiri isi, maka oge. Nhọrọ ọzọ bụ ịsonye Ista Ista ma ọ bụ Christ Child na ịbịnye nke pacifier. The Easter bunny na-eme mgbanwe na-eme ka ihe dị mma maka oge dị mma, dịka ozi ọma.
Onye ọ bụla nwere ụmụaka ndị ọzọ na gburugburu ndị enyi ma ọ bụ ezinụlọ ya, nwekwara ike ikwurịta maka ịnyefe ya na obere nwa ya na nwa ya. Enwere ike ịkọwa nwata ahụ, dịka ọmụmaatụ, na nwantakịrị ugbu a chọrọ ngwa ngwa karị.
Dika umuaka choro ka ha di ogologo ma nwekwuo ahuhu, okwu a na adi nma. Ma eleghị anya, na-ejikọta ya na ozi ịkụ azụ ma ọ bụ Ista Bunny / Christ Child, bụ ndị ga-ahụ ma jiri obi ike kweta ihe a niile. Ọ dị mkpa na ọ bụrụ na ị na-akụ nwa gị ka ọ ghara ihe ọ bụla.
Nwa ọ bụla nwere aka ya. Ya mere emela onwe gị ahụ iji tụnyere ya, kama jiri nwayọọ nwayọọ kụọ nwa gị site na pacifier. Ọfọn, ọ bụghị ọdachi maka ezé ezé - mgbe niile, anyị niile anwụghị.
Heatwave - chedo nwa na nwata
Agba agba nwa